Taliyaha Guud ee Ciiddanka Uganda oo sheegtay inaysan Hawlgalka AMISOM sii wadi karin
Taliyaha Guud ee Ciiddanka Difaaca Uganda, Jeneral Katumba Wamala ayaa humaag geliyey Doorka Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, wuxuuna sheegay in Khilaafka QM iyo Dowladda Uganda sababi doono in Ciiddanka Uganda isaga soo huleelaan doonaan Hawlgalka AMISOM.
Jeneral Katumba Wamaala ayaa hadalkaasi ku sheegay mar uu Warbixin siinayey Guddiga Arrimaha Dibedda ee Barlamaanka Uganda, wuxuuna sheegay inay QM xaqiijisay inaysan wax magdhow ah ka bixin doonin burburkii saddexdii Helikoptar ee ay Milliteriga Uganda lahaayeen, kuwaasi oo bishii August ee sannadkii 2012-kii ku burburay xilli ay ddul marayeen Buuraha Mount Kenya ee dalka Kenya.
Jeneral Katumba Wamala ayaa u sheegay Guddiga Barlamaanka Uganda inay QM ka heleen Isgaarsiin Rasmi ah, kuna sheegeen inaysan bixin Karin magdhowga Helikopteradii Milliteriga Uganda ee ku burburtay Hawada dalka Kenya.
Waxa uu intaasi ku daray inay QM sheegtay inay Diyaaradahaasi burbureen iyagoo aan weli soo gaarin Deegaanadda ay ka socdaan Hawlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, Taliyaha Guud ee Ciiddanka Difaaca Uganda, Jeneral Katumba Wamala waxa uu daaha ka roagy inay Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM ku sii kordhayso dhibaatadda, kadib markii ay Dowladaha Midowga Europe ku dhawaaqeen bishii Janaayo ee sannadkan inay boqolkiiba 20 jareen Miisaaniyadda Lacageed ee mushaar ahaanta loo siin jirey Ciiddanka Hawlgalka AMISOM.